Ny faharanitan-tsaina artifisialy an'i Microsoft izay hanintona sary an-tsary ny sarinao | Famoronana an-tserasera
Ny azon'ny artificielle artifisialy atao dia miankina betsaka amin'ny fahaizan'ny algorithma izay tanterahina amin'ny fikajiana fikajiana mba hahazoana vokatra mahaliana. Toy ny Microsoft Artigence Intelligence vaovao izay mahazo manao sarimiaina tarehy.
Raha vitanao ampitao ny sarin'ny tavanao izy hahafahany «misarika» karikature manakaiky ny endrika mampiavaka ny tavanao. Tena ny zavatra nataon'i Microsoft dia ny mamorona tambajotra neural manao sary sariitatra.
Ny tambajotra dia manana ny anarana CariGANs ary voaforon'ny teknolojia antsoina hoe CariGeoGAN. Izy io dia afaka mamaritra ny haitao ny endrik'ilay sary ka Azoko atao sarintany izany ary noho izany mamorona modely sariitatra.
Farany, CariStyGAN, no ho "manager" mba hanomezana io lafiny kanto io amin'ny fanaovana sarintany ny tarehintsika ka hiteraka sary an-tsary iray manontolo. Avia, ireo izay mivelona amin'ny fanaovana sarimiaina dia afaka miasa bebe kokoa ankehitriny satria ny Microsoft's Artimental Intelligence dia hanao izay hanasarotana azy ireo.
Mba hahatratrarana ireo valiny nomena ireo dia tsy maintsy nampiofanina ny rafitra tamin'ny sary an'arivony an'arivony ny Microsoft. Ny mahatsikaiky amin'ity rafitra ity dia ny fahafahan'izy ireo, 22,95% amin'ny fotoana, amin'ny famitahana ny mpampiasa hino fa mpanao sariitatra io fa tsy milina.
Ary tsy nijanona teto koa io zavatra io, hatramin'ny Microsoft te-handeha lavitra miaraka amin'ity Intelligence artifisialy ity, ary afaka mamakafaka ny horonan-tsary mba hahafahanay mamorona sary an-tsaina ny tenantsika amin'ny fakana horonantsary.
Teknolojia izay dia hahafahanao "misintona" sarin-tsarimihetsika amin'ny sary ary mandritra izany fotoana izany dia tanteraho ny fizotra miverina, izany hoe mijery sarimiaina ary "avereno avereno" mba hahitantsika ilay olona ao aoriany.
Aza adino ny tutorial anay mampihena lanja amin'ny Photoshop.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Microsoft dia mamorona fahakingan-tsaina artifisialy izay manao kariketra amin'ny tavanao
Art kanto, hafatra am-bifotsy